Limlahlile icala owatshontsha ingane - Ilanga News
Home Izindaba Limlahlile icala owatshontsha ingane
Limlahlile icala owatshontsha ingane
UKHANYISILE Ngubane ovume icala lokweba ingane ngoLwesihlanu eNkantolo yeMantshi yaseNgwavuma, emuva kwalokho lamlahla.
ULIVUME maqede lamlahla icala lokuntshontsha ingane eyayinezinsuku eziwu-3 izelwe ngo-2011 okumanje ineminyaka ewu-9 ubudala owesifazane waseJozini obevele eNkantolo yeMantshi yase-Ngwavuma ngoLwesihlanu.
UKhanyisile Ngubane (34), owaboshwa ngo-2015 ngecala lokuzama ukubulala yona le ngane engu-Abongwe Gumede (isibongo sikayise), kodwa yena ayeseyiqambe ngoNhlakanipho Ngubane, akazange ayichithele isikhathi inkantolo, uzivume zonke izono zakhe, wathi uyazisola ngento ayenza.
ILANGA laba ngelokuqala ukubika ngalolu daba ngonyaka ophelile ngesikhathi kutholakala ingane.
Laxoxa nonina, uNkz Fikelephi Mpontshane (25) waKwaPhaweni, eJozini, owalitshela ukuthi ingane yakhe yebiwa eneminyaka ewu-16 ubudala.
Wathi usenze nolibofuzo ukuze kuqinisekiswe ukuthi ingane ngeyakhe ngempela. Imiphumela yabuya yakuqinisekisa ukuthi u-Abongwe uyindodana yakhe ngampela.
Uthi kwafika owesifazane angamazi kubo, wabatshela ukuthi uqhamuka emnyangweni wezempilo uyobasiza ukuba bathole isitifiketi sokuzalwa kwengane ngokushesha.
Uthi wabathembisa ukuthi uzobalanda ngakusasa nomunye umzala wakhe naye owayenengane encane, kodwa eyakhe yayisinezinyanga izelwe. Uthi wabuya ngempela ngakusasa, wabathatha. Kwathi sebesedolobheni eJozini, wabahlukanisa wayalela umzala wakhe ukuba aye kwenye indawo lapho ezosizakala khona, wathi kuyena makahambe naye ngoba ingane yakhe isencane.
Uthi wamjikela esehlukene nomzala wakhe waqala wakhuluma naye emthethisa emtshela ukuthi ufuna ingane.
Uthi wagcina emluthe ngokumthuma esitolo. Wamnika u-R11 wokuthi ayomthengela ngawo, wamshiya emphathele ingane eme ngaphandle esitolo. Uthi waphuma esitolo engasabonwa uNkz Ngubane nengane.
Bathola umkhondo wokuthi umsolwa unezihlobo ayefikele kuzona ngakubo, lapho wabuza khona ukuthi akekho yini umuntu wesifazane ezimaziyo osanda kubeletha, ufuna ukumsiza, base bemyalela kubo.
Zambuza ngodadewabo, wabatshela ukuthi waboshwa eGoli ngo-2015 ngoba ezame ukubulala ingane yakhe yomfana nomyeni wakhe. Uthi wabatshela ukuthi unengane yomfana ayibeletha ngoNtulikazi (July) ka-2011.
Lwaqala lapho uphenyo lwamaphoyisa olwagcina luwaholele kumsolwa ejele lapho edonsa khona isigwebo (sokuzama ukubulala ingane). Wazivumela emaphoyiseni ukuthi ingane akuyona eyakhe, wayintshontsha eJozini ngoba enenkinga yokuthi wayengabatholi abantwana.
Wathi umyeni wakhe wayazi ukuthi ukhulelwe kanti wayemkhohlisile. Uphenyo lwamaphoyisa olunzulu obeluholwa nguCapt Saziso Ndwandwe, ebambisene noSgt Qaphela Mdluli bophiko olulwa nokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane esiteshini saseJozini, lwagcina luwaholela ekuboshwe kuKhanyisile.
Ingane yabuyela kuNkz Mpontshane, yabingelelwa ngomcimbi yahlatshelwa izimbuzi zokuyamukela.
Ekhuluma neLANGA emuva kokuba uNkz Ngubane elahlwe yicala, uNkz Mpontshane uthe ujabulile ngesinqumo senkantolo.
“Ngijabulela ukuthi kuzokwenzeka ubulungiswa ngobuhlungu angizwisa bona engiphuca indodana yami. Ngijabulela nokuthi ingane yami isibuyile,” kusho uNkz Mpontshane.
Previous articleI-Downs idedele impama kowe-caf
Next articleBavale isikole besot uthishanhloko ngokuphenduka umashonisa